पाटन विमानस्थलमा सीता एयरलाइन्सद्वारा गरेको परीक्षण उडान सफल ! | सुदुरपश्चिम खबर
पाटन विमानस्थलमा सीता एयरलाइन्सद्वारा गरेको परीक्षण उडान सफल !
तस्बिर : सामाजिक सन्जालनाट
बैतडी- सीता एयरलाइन्सले बैतडीको पाटन विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हवाई सेवा दिन ईच्छुक देखिएको सीता एयरले मंगलबार पाटन विमानस्थलको उडान परीक्षण गरेको पत्रकार बसन्त विष्टले जानकारी दिनुभएको छ ।
मंगलबार प्रदेशका पहाडी जिल्लाका चारवटा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने क्रममा सीता एयरले बैतडीको पाटन विमानस्थलमा पनि उडान परीक्षण गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । सीता एयरले प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई आधार बनाइ पहाडी जिल्लामा नियमित उडान गर्ने लक्ष्यअनुरूप गरिएका परीक्षण उडान सफल भएको जनाएको छ ।
बझाङको विमानस्थल, अछामको साफेबगर, डोटीको दिपायल र बैतडीको पाटन विमानस्थलमा गरिएको परीक्षण उडान सफल भएको सीता एयरलाइन्स व्यवस्थापन समिति सदस्य घनस्याम अर्चायले बताउनुभएको छ । पाटन विमानस्थल परीक्षण उडान सफल भएको भन्दै सिता एयरले नियमित हवाइ सेवाका लागि छलफल गरिने जनाएको छ ।
यस्तै मंगलबार सिता एयरलाइन्सको टिमलाइ स्वागत गरिएको छ । उडान परीक्षणका लागि पाटन पुगेको सिता एयरलान्सको टिमलाई पाटनमा स्वागत गरिएको पत्रकार विष्टले बताउनुभएको छ । सीता एयरलाइन्सको टिमलाई नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय नेता हरिमोहन भण्डारी पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख , उपप्रमुख लगायत अन्य जनप्रतिनिधिरुले स्वागत गरेका हुन । यसअघि प्रदेशका तीन पहाडी जिल्लामा समिट एयरले साप्ताहिक उडान गरिरहेको छ